सर्वश्रेष्ठ 24 Dreamcatcher टैटू डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु - टैटू कला विचार
सर्वश्रेष्ठ पुरुषहरु र महिलाहरु को लागि उत्तम 24 Dreamcatcher टैटू डिजाइन आइडिया
sonitattoo अगस्ट 16, 2016
के तपाइँ सपना सपनाको बारेमा सुन्नुभयो? यो निवासी अमेरिकीहरूले खराब सपनाहरू रोक्न र मानिसहरूलाई राम्रोसँग अनुमति दिन प्रयोग गर्दछ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका टटू डिजाइनहरू छन् जुन सपनाकोचरकर्ताको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
Dreamcatcher टैटू अर्थ
Dreamcatcher टैटू मूल अमेरिका को लागि लोकप्रिय छ। टैटू डिजाइनले मानिसहरूलाई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतीक बनाउँछ। # ड्रीमचेचर टटुटले खराब र नकारात्मक ऊर्जा हटाउन मद्दत गर्दछ। मानिसहरू जो डराउन चाहन्छन् खराब सपना वा सपनाहरू सपनाकोचोटि ट्याटुको प्रयोग गर्छन्। ती ट्याटुहरू स्याहार गर्नेहरू शान्तिपूर्ण र खुसीसाथ सुनिरहन्छन्। यदि तपाईं असाधारण # ट्याटू डिजाइन प्राप्त गर्ने योजना बनाइरहनुभएको छ जुन जीवनमा यसको प्रस्तुतीकरणमा धेरै कथाहरू बताउनेछ जुन सपनाच्याट टैटू प्रयोग गर्न सक्दछ।
जब सपना सपनाचर टटूमा प्यानहरू थपिएका हुन्छन्, यसले विशेष रूपमा बालबालिकाको लागि मनोरञ्जनको स्रोतको रूपमा काम गर्दछ। पंख जो हावा र सांसको लागि खडा छ जीवनको लागि धेरै आवश्यक छ। यसले खराब सपनाहरूलाई बच्चाहरूबाट टाढा राख्न मद्दत गर्न सक्छ। जब सपना बिचरमा भिन्न पंखहरू थपिएका हुन्छन्, ट्याट परिवर्तनको अर्थ। जब उल्टो पंख थपिएको छ, यसले बुद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र ईगलको पंख थपिएको छ भने यो साहसको प्रतीक हुन्छ। मकड़ी र सपनाकोचरले टटूको रचनात्मकताबारे कुरा गर्न सक्दछ। सपनाचेचरले थपिएको वस्तुको आधारमा धेरै चीजहरू मतलब गर्न सक्छ र तपाइँलाई प्रयोग गर्नको लागि एक हो।
त्यहाँ धेरै मानिसहरू त्यहाँ छन् जसले तपाईंलाई यो सपनाकोचट टैटू संग मद्दत गर्नेछ। धेरै लोग जो फैशन प्रेमी र मनपराने वाला टैटू को प्रेमीहरु को सपनाहरु लाई हमेशा आकर्षित गर्न को लागी सपने वाला टेक्सास टैटूहरु को लागी जान्छन्।
लवली Dreamcatcher टैटू
अनलाइनमा यो सयौं व्यक्तिहरू छन् जुन अर्को स्तरमा सपना क्याचर टटू लिन मन पराउँछन्।
राम्रो सपनाचिचाउने टटूको मूल्य महसुस नगरी महसुस नहुन सक्छ। जब तपाईं यो समय राम्रो छ विशेषज्ञहरु को लागि अनलाइन खोज गर्न समय निकाल्छ, तपाईं अफसोस गर्नुहुने एक महान सपनाकोचट ट्याट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ
महिला Dreamcatcher टैटू
संसारको वरिपरि वरिपरिका वरिपरिका आगो लगाउँदा सपनाको ब्याट्री प्रवृतिको साथ, तपाईं यो चुनौती पाउनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ।
रोमान्टिक Dreamcatcher टैटू
पहिलो कुरा कि मान्छे जब तिनीहरू सपनाच्याच टैटू जान चाहन्छन् त्यो प्रश्न सोध्न हो। प्रश्न भनेको उनीहरूले असाधारण सपना क्याचर टटू गर्न के हो भन्ने कुरा बुझ्न मद्दत गर्दछ।
पैदल Dreamcatcher टैटू
एक सपना कोचिंग टैटू को मतलब छ कि एक चीज को लागि धेरै चीजहरु को लागि धेरै चीजहरु को मतलब छ। जब तपाईं यो मन पराएमा, तपाईं साढे वर्षको रूपमा बढ्न चाहनु हुन्छ। त्यो लत हो।
फिर्ता Dreamcatcher टैटू
Dreamcatcher टैटू एक लत छ कि फैलाउन र फैलावट राख्छ जबसम्म तपाईंको शरीर को एक भाग हो जहाँ तपाईं यी सपनाकोचेट टैटू देख्न सक्नुहुन्न। Dreamcatcher टैटूले हामीलाई धेरै स्टोरहरू बताउन सक्छ जुन हामी चाँडै बिर्सन सक्दैनौं।
जब तपाईं सपनामा सपना चेटटोट हेर्नु हुन्छ के गर्नुहुन्छ? Dreamcatcher टैटू अब सामान्यतया ठीक कला राज्य मा स्वीकार गरिन्छ।
क्यान्सर Dreamcatcher टैटू
आज, अब विद्रोही को एक संकेत छैन न त यो एक छ अपराध छैन। हामी भन्न सक्छौं कि प्रत्येक पाँच अमेरिकियों मध्ये एक को यो सपना सपनाचट टैटू छ।
Chic Dreamcatcher टैटू
Dreamcatcher टटू सार्वभौमिक भएको छ किनकि मानिसहरूले संसारको वरिपरि यसको प्रयोग गर्दै छन्।
यदि तपाइँ एक रचनात्मक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने Dreamcatcher ट्याट एक कला हुन सक्छ। यस प्रकार DreamCatcher टटू हाम्रो हरेक दिन सहायक हो कि ज्यादातर मान्छे को बिना नहीं गरेर सकते।
यदि तपाईं यो मनपर्ने सपनाकोचट टटू चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले गर्नु भएको पहिलो कुरा एक असल कलाकार हो जसले तपाईंलाई डिजाइनको साथ मद्दत गर्नेछ।
यस टैटूको सुन्दरताले धेरै मानिसहरुलाई यसको प्रशंसा गर्यो। यो आँखाहरू समात्न लागिएको छ। जब तपाईं मानिसहरू आफ्नो शरीरमा स्याही देख्नुहुन्छ त तपाईं कुरा गर्ने कुरा जान उत्सुक हुनुहुन्छ। छवि स्रोत
रंगीन Dreamcatcher टैटू
यस प्रकारको टटू गर्नु भनेको तपाईले तपाईंलाई प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईले तपाइँको शैलीमा फरक पार्नु आवश्यक छ। छवि स्रोत
त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले सधै आफ्नो टैटू डिजाइनको साथ अद्वितीय हेर्न को लागि सोच को बारे मा सोच रहे हो। छवि स्रोत
अद्भुत Dreamcatcher टैटू
एक टटू संग असाधारण सरल तरीका यो छ कि यो को रूप मा सुन्दर छ। तपाईं यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं असाधारण टैटू छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ कि तपाइँ जनतामा भन्दा भन्दा बढी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। छवि स्रोत
पूर्ण ब्याक Dreamcatcher टैटू
टैटू प्राप्त गर्ने लागत महँगो छैन किनकि तपाईं सामान्य बाहिर केहि सोचिरहेका छन्। यो # एक प्रकारको साथमा, तपाईं धेरै पैसा खर्च गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईले गर्नु आवश्यक छ एक राम्रो कलाकार प्राप्त गर्न र काम गरिसकेको छ। छवि स्रोत
सेक्सी Dreamcatcher टैटू
Dreamcatcher टैटू तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ के आधारमा सेक्सी हुन सक्छ। शरीरको दाँतको भाग जुन तपाईं ठूलो भिन्नता हुन सक्छ र यो कारण हो, धेरै महिलाहरूले शरीरको केहि भागहरूमा तिनीहरूको टट स्याङ्गो लगाउँछन् जुन आँखाले अनुहारमा राख्छ। छवि स्रोत
प्यारा ड्रीमचेचर टैटू
हरेक सपनाचयन प्यारी छ। त्यहाँ शरीरको कुनै पनि भाग हो जहाँ तपाईं आफ्नो सपनाकोचर टटूलाई राम्रो लाग्दैन। यस टैटूको बारेमा के भन्नु हुन्छ? छवि स्रोत
जब तपाईं आफ्नो पछाडि सुन्दर लगाउन चाहानुहुन्छ, तपाईं यसमा ठूलो ट्याट्ट खिच्न सक्नुहुन्छ। यो महिलाले तिनको सपनाचयनलाई अर्को स्तरमा लैजान्छ जब उनले यो टैटू पाए। छवि स्रोत
ह्यान्ड ड्रीमचेचर टैटू
जब तपाईं यसलाई आफ्नो ट्याट स्याउ लगाउनुहुन्छ तपाईंको हातको अपवाद गर्नुहोस्। के यो सुन्दर देखिँदैन? हामी धेरै धेरै टटू खोजिरहेका छौं जुन अरूबाट अलग रहन्छ, यो एक हो। छवि स्रोत
यो जस्तै एक ट्याटू संग, तपाईंले सम्पूर्ण संसारलाई समात्न पाउनुभयो। छवि स्रोत
थपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Dreamcatcher Tattoo Designs
पुरुषहरूको लागि टैटूkoi fish tattooपैट टैटूबहिनी टैटूहरूबिल्ली ट्याटोओटोपस ट्याटूएंकर टैटूहरूचेरी खिलौना टैटूगर्दन टैटूहरूपक्षी टैटूहरूछाती टैटूहरूटैटू विचारहरूक्रस टैटूतीर टटूचन्द्र टोटोटोहात टाटाटोसकम्पास टैटूयुगल टैटूहरूआँखा टटूगुलाब टैटूहरूहृदय टटटोसिंह टटटोहरूईगल ट्याटोFeather Tattooप्यार टैटूफूल टैटूहरूटखने टैटूदूत टैटूरिप टैटूअनन्तता टटूmehndi डिजाइनसंगीत टैटूहरूफिर्ता ट्याटोहरूतितली टैटूहरूहात ट्याटोससूर्य टैटूहरूआदिवासी टैटूहरूwatercolor टटूहात्ती टटूज्यामितीय ट्याटुहरूकमल फूल टटूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूबिस्कुट टटूआस्तीन टैटूहरूप्यारा टैटूहरूहीरे टैटूक्राउन टैटूहरूट्याटुहरू केटीहरूको लागिहेनना टैटू